I-500ml yokuThambisa iSanitizer yesandla ngeTekhnoloji ye-BIO
Amaqhekeza angama-50 oTywala / iHyamine Sula
Amaqhekeza ali-150 oTywala / iHyamine Sula
Ungayikhetha njani i-anti-bacterial, sanitizing, kunye ne-disinfecting sanitizer yezandla?
Nika ingqalelo ngakumbi kwiphakheji xa uthenga isicoci sesandla. Ngokubanzi, umxholo wotywala uphawulwe kuwo. Eyona ilungileyo ngama-75%. Akucetyiswa ukuba ukhethe i-90% okanye i-95% yoxinaniso lotywala ngenxa yoxinzelelo oluphezulu luya kwenza ipro ...
Umgaqo wokubulala iintsholongwane kotywala
ngomphathi ku 20-11-27
Utywala obunamandla amakhulu okungena kwi-membrane ebusweni bentsholongwane kwaye ungene ngaphakathi kubhaktheriya. Ukubulala iintsholongwane ngokuDambisa amanzi, ukujija kunye nokuchaza iiproteni ezenza isiseko sobomi bebacteria. Le ntsholongwane yenziwe ngamaqabane emfuzo ...
Iphondo laseShanxi liza kukhuthaza ngokupheleleyo ipetroli ye-ethanol kwizithuthi ukusuka ngo-2020
ngomphathi ku 20-11-10
Kuxelwe ukuba ukuze kuqhubeke ukusetyenziswa kobume bamandla, kunciphise ukungcola kwezithuthi, kwaye kuphuculwe imeko yendalo, ukuqala kulo nyaka, iphondo lethu liya kuthi likhuthaze ngokuzinzileyo nangokuzinzileyo ukusetyenziswa kwepetroli ye-ethanol kwizithuthi kwiphondo liphela ngokungqinelana ne .. .
Ulawulo lwezaMandla kuZwelonke luphanda ukukhuthazwa kunye nokusetyenziswa kwepetroli ye-ethanol kwizithuthi (Ngomhla we-10, 2019)
Ukulandela nge-26 kaFebruwari, 2019, uLawulo lwaMandla kuZwelonke lubambe ungcelele lweenkampani ze-biofuel ethanol eBeijing ukumamela izimvo kunye neengcebiso zeenkampani; ekuqaleni kuka-Matshi, iSebe Jikelele kuLawulo lwezaMandla kuZwelonke likhuphe ulwazi ...